Sun, May 24, 2020 at 9:20pm
ललितपुर, १ जेठ । चापागाउँमा ६ दिनदेखि यातायात सेवा बन्द छ । स्थानीयवासीले सडक मर्मतको माग गर्दै सो यातायात सेवा बन्द गराएका हुन् । सडक विस्तार आयोजनाले समयमै चापागाउँ–सातदोबाटो सडकखण्ड मर्मत नगर्दा स्थानीयवासीले धुलो, हिलो र धुवाँको समस्या खेप्दै आएका छन् । ‘धुवाँ, धुलो अति भो, ठेक्का दिएको कति भो, समय हेर्यौँ पटक पटक, पछि हट्दैनांँै हामी यो पटक’ नाराका साथ चापागाउँवासीले..
काठमाडौं, ३१ वैशाख । पछिल्लो समय भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा मानव तस्करीको संख्यामा वृद्धि भएसँगै भारतले नेपालीहरु माथि अध्यागमन पार गर्न कडाइ गर्दै आएको छ । भारत हुँदै तेस्रो मुलुक जाने नेपालीहरुले भारतीय अध्यागमन पार गर्दा दूतावासको नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) देखाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागु भएको छ । नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले भारत हुँदै तेस्रो मुलुकको यात्रा गर्ने नेपाली नागरिकहरुलाई एनओसी बनाउन भन्दै..
काठमाडौँ, ३१ वैशाख तपाईले मोटरसाइकलको चाबी लगाउन भुल्नु भएको त छैन ? चाबी लगाए पनि ह्याण्डिल बन्द गर्न पो बिर्सनु भयो कि ? या असुरक्षित ठाउँमा पार्किङ गर्नु भएको त छैन ? त्यसो भए मोटरसाइकल चोरी हुने सम्भावना बढी नै हुन्छ । चोरहरुले पार्टपूर्जा परिवर्तन गरेर मोटरसाइकल चलाउने गरेकाले तपाईको मोटरसाइकल भेटिने सम्भावना कम छ । काठमाडौँ उपत्यकामा मोटरसाइकल चोरी गरेर पार्टपूर्जा..
राँझा, ३१ वैशाख कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीको हवाईयात्रा सुरक्षित बनाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेपालगञ्ज कार्यालयले पहल गरेको छ । हवाईयात्रा सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न एयरलाइन्स कम्पनीलाई निर्देशन दिएको प्राधिकरणको नेपालगञ्ज कार्यालयका प्रमुख प्रेमचन्द्र ठाकुरले बताउनुभयो । नेपालगञ्ज र हुम्ला विमानस्थलमा तीर्थयात्रीको सुविधमा ध्यान पु¥याउन कार्यालयले कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । “कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्रुलाई लक्षित गरी नेपालगञ्ज विमानस्थलमा अलग्गै भवन बनाउँदै..
एजेन्सी, ३१ वैशाख विश्वको सबैभन्दा तीव्र गतिमा कुद्ने बुलेट ट्रेनको परीक्षण जापानले सुरु गरिसकेको छ । ४०० किलोमिटर प्रति घण्टाको रफ्तारको क्षमता भएको सो रेलको निर्माणसँगै यात्राका साधनहरुको क्रान्तिकारी विकास जारी रहेको छ । शुक्रबार मात्र (एफएफए–एक्स), अल्फा–एक्स भर्जनको सिन्कनसेन ट्रेन तीनवर्षको निर्माणपछि पहिलो परीक्षणका लागि सञ्चालनमा आएको हो । यसरी परीक्षणपछि पूर्ण रुपमा तयार भइसक्दा २०३० सम्ममा सो रेल सञ्चालनमा आइसक्नेछ..
काठमाडौं, ३० बैशाख राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को वाइड बडी जहाजबाट जापान उडान निश्चित भएसँगै टिकट बुकिङ खुला भएको छ । जापानको ओसाका उडानका लागि आइतबारदेखि टिकट बुकिङ खुला गरिएको छ । निगमले असार १९ देखि सोमबार, बुधबार र शुक्रबार गरी सातामा तीन दिन उडान गर्ने भएको हो । निगमले असार १९ गतेदेखि जापानको ओसाकामा उडान गर्ने निश्चित भएसँगै टिकट..
बेनी, ३० वैशाख । कालीगण्डकी करिडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक सुस्ताएको छ । पारवहन र व्यापारिक हिसाबले निकै महत्वपूर्ण मानिने कोरला नाकाको आधार यस सडक निर्माणको गति सुस्त भएपछि आयोजनामाथि चौतर्फी दबाब बढेको छ । दुई ठूला मुलुक एउटै करिडोर : दुई ठूला मुलुक चीन र भारत जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोरको बेनीदेखि जोमसोमसम्म कालोपत्र र जोमसोमदेखि कोरला नाकासम्म ग्राभेल गर्ने गरी सडक स्तरोन्नति..
पोखरा, २९ वैशाख । पोखरादेखि भारतको देहरादुनसम्म सिधा यात्रुवाहक बस सेवा सञ्चालन हुने भएको छ । पृथ्वी राजमार्ग बस सेवा समितिद्वारा आगामी जेठ ८ गतेदेखि बस सेवा सञ्चालन गरिने आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराइएको छ । सो अवसरमा पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एनकुमार साईले मोर्डन एरा टुर्स एण्ड ट्राभल्सले सातामा एक दिन बुधबार बस सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो । उहाँले पोखरादेखि खुलेको..
ललितपुर, २८ वैशाख । यात्रु र सवारीचालकले रातको समयमा समेत सहज रूपमा हिँड्ने वातावरण बनाउन ललितपुर महानगरपालिकाका मुख्य सडकमा ‘स्मार्ट’ बत्ती जडान गरिने भएको छ । महानगरपालिका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहकार्यमा महानगरका मुख्य सडकमा बत्ती जडान हुन लागेको हो । सडकबत्ती जडानले स्थानीयवासीसँगै यहाँ घुम्न आउने विदेशी पर्यटकलाई समेत सुविधा हुने महानगरले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने योजनासहित..
काठमाडौँ, २६ वैशाख । पछिल्लो २४ घण्टाको विवरण हेर्दा मुलुकभरका वनजङ्गलमध्ये एक हजार ६७० स्थानमा डढेलो लागेको देखिएको छ । अमेरिकी वैज्ञानिक संस्था नासाको मोडिस् स्याटलाइटले पठाएको तस्बीरमा नेपालका ३५ जिल्लामा आगलागी भएको देखिएको हो । जसमध्ये सबैभन्दा बढी कैलालीमा ४१७ स्थानमा वन डढेलो लागेको देखिएको छ । नासाको उक्त तस्बीरका आधारमा हेर्दा कञ्चनपुरमा १९१, डडेल्धुरमा १८८, दाङमा १७५, सुर्खेतमा १४६, बर्र्दियामा १३३,..
साँखु, २६ वैशाख । लामो समयदेखि निर्माणाधीन चावहिल–साँखु सडकखण्ड कालोपत्र नहुुँदा मारमा परेका बौद्ध व्यापार सङ्घ र स्थानीयवासीले यातायात अवरुद्ध पारेका छन् । पाँच सयको सङ्ख्यामा रहेका स्थानीयवासी तथा व्यापारीले बिहान ८ बजेदेखि गरेका साङ्केतिक विरोध कार्यक्रमका कारण सडक अस्तव्यस्त भएको छ । आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयवासीको एउटै माग छ चावहिल–साँँखु सडकखण्ड तत्काल कालोपत्र गरी धँुवाधुलोबाट मुक्त हुनुपर्यो । विगत चार वर्षदेखि सडक धुलाम्मे..
बेनी, २५ बैशाख । सदरमुकाम बेनीबाट १५ जना यात्रु बोकेर तोरीपानीतर्फ गइरहेको ना५ख ५७२४ नम्बरको बस बुधवार साँझ ५ बजे बेनी नगरपालिका–९ भुतादैला नजिकबाट तल खस्दा सवार सबै यात्रु घाइते भएका छन् । दुर्घटनाका सबै घाइतेको बेनी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । घटनास्थल पुगेका ट्राफिक प्रहरीका अनुसार साँधुरो सडकबाट बस पल्टिएको हो । दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । घाइतेमध्ये बेनी-९ का..
काठमाडौँ, २५ वैशाख । ट्राफिक प्रहरीले उपत्यकाको ट्राफिक सुधारका लागि १४ हजार ८४३ चालकलार्ई प्रशिक्षण दिएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यकाको ट्राफिक सुधार तथा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि गरेको तीन महीने कार्ययोजनाअन्तर्गत १४ हजार ८४३ मोटरसाइकल तथा स्कुटर चालकलाई प्रशिक्षण दिएको हो । महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक जयराज सापकोटाले उपत्यकाको ट्राफिक सुधारका लागि महाशाखाले विभिन्न निकायसँग मिलेर काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो..
पोखरा, २४ वैशाख । पोखरा विमानस्थलमा आज दिउँसो १ः४५ बजे अल्ट्रालाइट जाइरोकोप्टर विमान दुर्घटना भएको छ । पर्यटक बोकेर पोखरा नगरीको दृश्यावलोकन गरेर अवतरण गर्ने क्रममा धावनमार्गबाट चिप्लेर बाहिर जाँदा दुर्घटना भएको पोखरा विमानस्थल कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत काशीनाथ पौडेलले जानकारी गराउनुभएको छ । सो जाइरोकोप्टर विमानका चालक फ्रेञ्च नागरिक क्याप्टन एरिक र पर्यटक अनिश भट्टचन सवार थिए । उहाँहरु दुवैजना सकुशल हुनुहुन्छ..
काठमाडौँ, २४ वैशाख । काठमाडौँको आठ स्थानमा ट्राफिक बत्ती जडान शुरु भएको छ । कालीमाटी, सिंहदरबार, पद्मोदय घुम्ती, बागबजार तीनकुने, पुरानो बानेश्वर, गौशाला र मित्रपार्क चोकमा ट्राफिक बत्ती जडान गर्न लागिएको हो । काठमाडौँका धेरै स्थानमा ट्राफिक बत्ती आवश्यक भए पनि बढी आवश्यक स्थान छनोट गरेर ट्राफिक बत्ती जडान भइरहेको सडक विभागले जनाएको छ । यसअघि ट्राफिक बत्ती भएर पनि बिग्रिएका ठाउँमा..
नेपालगञ्ज, २४ वैशाख । नेपालगञ्जको न्यूरोडमा रहेको हरित पेटी(ग्रिन बेल्ट)को सौन्दर्यकरणको विवाद समाधानका लागि पहल थालिएको छ । हरियाली अभियान कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले रु १८ लाखको लागतमा न्यूरोड क्षेत्रको ग्रीनबेल्टको बीच भागमा टायल लगाएर सौन्दर्यकरण गर्न थालेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । ठेकेदारले काम गर्दा स्थानीयले काम गर्न नदिएपछि विवाद शुरु भएको हो । सो क्षेत्रका व्यापारी कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले ग्रिनबेल्टको बीच भागमा..
काठमाडौँ, २३ वैशाख चापागाउँका नीरज तामाङ घरबाट सातदोबाटो पुग्दासम्म धुलाम्मे हुनुहुन्छ । सडक विस्तारका लागि सडक खनेपनि थप काम हुन नसक्दा उहाँ धुलाम्मे हुने गर्नुभएको छ । लगनखेलस्थित एउटा सहकारी संस्थामा कार्यरत उहाँ धुलोकै कारण बाहिरबाट थप एक जोर लुगा लगाउने गरेको बताउनुहुन्छ । झण्डै चार वर्ष अघि सडक विस्तार शुरु भए पनि सम्पन्न हुन नसक्दा तामाङजस्तै धेरै नगरवासी हैरान छन् ।..
काठमाडौँ, २३ वैशाख महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले टुँडिखेल र कोटेश्वर चोक आसपासमा पिक एन्ड ड्रप प्रणाली कार्यान्वयन प्रभावकारी भएसँगै कलंकी एरियामा आइतबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । महाशाखाले उपत्यकाकै अत्यन्त व्यस्थ चोक कलंकीमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नको लागि पिक एन्ड ड्रप कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता जयराम सापकोटाले अन्य स्थानमा पिक एन्ड ड्रप प्रभावकारी भएकाले विस्तार गर्दै आएको बताए । ..
काठमाडौँ, २२ वैशाख कलङ्की चोकमा हुने सवारी चाप हटाउन आजदेखि ‘पिक एण्ड ड्रप’ व्यवस्था लागू गरिएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले अत्यधिक सवारी साधन रोकिने चोकका रुपमा रहेको कलङ्कीमा सो व्यवस्था लागू गरेको हो । ‘पिक एण्ड ड्रप’ व्यवस्था लागू गरेसँगै अब उपत्यका बाहिर जाने र उपत्यकाभित्र आउने सवारी साधनले छुट्टाछुट्टै स्थानमा यात्रु चढाउने र ओराल्नुपर्ने भएको छ । महाशाखाका प्रमुख..
धनगढी, २२ बैशाख । धनगढी विमानस्थल एक महिनाका लागि बन्द भएको छ । धावन मार्गको स्तरोन्नतिका लागि आइतबारदेखि जेठ २१ गतेसम्म विमानस्थल बन्द हुने धनगढी विमानस्थलका प्रमुख तेजबहादुर बुढथापाले जानकारी दिए । त्रिभुवन विमानस्थल पछिको सबैभन्दा ठूलो धावनमार्ग रहेको धनगढी विमानस्थलको धावन मार्ग मर्मत र पार्किङ क्षेत्र विस्तार गरिने भएको छ। मर्मत कार्य आइतबारदेखि निर्माण कम्पनीले सुरु गरिसकेको छ । झण्डै २२ करोडको..
हेटौंडा, २१ बैशाख । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका-९ स्थित जैसिङमा तीनवटा ट्रक आपसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते भएका छन् । ३ जनाको अवस्था गम्भीर छ । हेटौंडाबाट नारायणगढतर्फ जाँदै गरेको ना ६ ख ३३७४ नम्बरको ट्रक र नारायणगढबाट हेटौंडातर्फ आइरहेको ना ४ ख ११९२ नम्बरको ट्रक आपसमा ठोक्किएका हुन् । दुई ट्रक ठोक्किएपछि नारायणगढतर्फबाटै आइरहेको ना ६ ख ९९०७ नम्बरको तेस्रो..
काठमाडौं, २० बैशाख । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गरेकी छन् । शुक्रबार बसेको संघीय संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रमले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने उद्धेश्य राखेको बताइन् । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गर्दै काठमाडौंलाई भारत र चीनदुबै तर्फ जोड्ने रेल विरगञ्ज–काठमाडौं र..
काठमाडौँ, २० वैशाख सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सातवटै प्रदेशका प्रमुख शहरमा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने नीति ल्याएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद् (राष्ट्रिय सभा-प्रतिनिधिसभा)को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै आगामी आवदेखि सबै प्रदेशमा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने बताउनुभएको हो । ठूला सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गरिने तथा वायुमण्डलको स्वच्छता र जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा..
काठमाडौँ, २० वैशाख । नेपाल र भियतनाम वीच हवाई सम्झौता हुने भएको छ । भियतनामबाट सोझै भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई उडान गर्न नेपालले तयारी गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी साता गर्ने भियतनाम भ्रमणका क्रममा नेपाल र भियतनाम वीच हवाई सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको हो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमणका क्रममा हवाई सहित केही महत्वर्पूण सम्झौता हुँदैछ, हवाई सम्झौतासँगै..
रुपन्देही, १९ वैशाख । बुटवल पाखापानीमा आज भएको सवारी दुर्घटनामा एक युवतीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा बुटवल–१२ तामनगरका २० वर्षीया पुष्पा भण्डारी रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी हवल्दार भोजप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । दुर्घटनामा परी पुष्पाका बुबा ४७ वर्षीय घनश्याम भण्डारी घाइते हुनुभएको छ । उहाँको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ । बुटवलबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको लु१ख ६२३३ नंको..
दाङ, १८ बैशाख । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दाङका नेता सवार कार दुर्घटना हुँदा चार जना घाइते भएका छन् । घाइते नेताहरूमा दाङका शिवकुमार आचार्य, लक्ष्मण शर्मा, मनोहर बुढाथोकी, र शिवानन्द डाँगी रहेका छन् । नेता सवार बा १८ च १२५ नम्वरको कार र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको ना ६ ख ४३४९ नम्वरको ट्रक एक आपसमा ठोक्किँदा उक्त दुर्घटना भएको प्रहरीले..
चौतारा, १८ वैशाख । विसं २०७२ को भूकम्पपछि चार वर्षदेखि बन्द रहेको सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका खुलाउन तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ । आगामी जेठ तेस्रो साता सम्ममा नाका खुलाउने कार्यक्रमअनुसार अरनिको राजमार्गको बाह्रबिसे–तातोपानी खण्डको सडक तथा पुल निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । बन्द नाकासँगै लार्चामा निर्मित सुख्खा बन्दरगाह बुधबार हस्तान्तरण गरिने भनिए पनि काममा ढिलाइ भएकाले एक महीनापछि सरेको उद्योग..
काठमाडौँ, १७ वैशाख कैलालीको लम्कीमा मंगलबार बिहान ट्रकको ठक्करबाट एक विद्यार्थीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । ठक्करबाट युवतीको मृत्युपछि लम्की तनाग्रवस्त भएको छ । आक्रोशित स्थानीय बासिन्दा र प्रहरीबीच झडप भएको छ । राजमार्ग बन्द गरेर प्रदर्शनमा उत्रेका मृतकका आफन्त र प्रहरीबीच झडप हुँदा सात प्रहरी र एक शिक्षक घाइते भएका छन् । घाइतेको लालरत्न अस्पताल लम्कीमा उपचार भइरहेको छ । लम्कीचुहा नगरपालिका ३..
काठमाडौँ, १७ वैशाख सार्वजनिक बसका टिकट काउन्टरमा कार्यरत कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा पोशाक लगाउनुपर्ने भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका, ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवसायीको छलफल अनुसार अब सार्वजनिक बसका टिकट काउण्टरमा कार्यरत कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा पोशाक लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ र नयाँ बसपार्क सञ्चालन गरेको ल्होत्से बहुउदेश्यीय प्रालिको संयुक्त आयोजनामा उक्त अभियान सोमबार नयाँ बसपार्कबाट शुरु गरिएको..
वाइड बडी जहाजबाट ४५ हजारमै जापान उड्न पाइने !
काठमाडौँ, १६ वैशाख राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को वाइड बडी जहाजबाट रु ४५ हजारमै जापानको यात्रा तय गर्न सकिने भएको छ । आगामी असार १९ (४ जुलाई, २०१९) देखि जापानको ओसाका सिधा उडान भर्ने तयारी गरेको निगमले काठमाडौँ–ओसाका उडानको भाडा निर्धारण गरेको हो । जसअनुरुप एकतर्फी ४५ हजार र दुईतर्फी भाडा ७७ कायम गरिएको छ । जापानको एभिएसनले स्वीकृत..
Results 1262: You are at page 18 of 43